Honye Gear, bhaudhi Structure Hose Clamp, Steel Belt Clamp - Hengwei
Heavy Duly-Hose okusungisa
Heavy Duly Hose okusungisa-Rubber bhurangeti
V-Band Hose okusungisa-Heavy Duly Spring Type
V-Band Hose okusungisa-Heavy Duly Type
zvigadzirwa edu Anonyanyowanika kushandiswa motokari mumatunhu mafuta, injini Mapaipi, abudise nenyere mutsetse, uye ivhu Mapaipi, iro rinogona kushandiswa muna rabha hosipaipi, zvinhu zvenaironi hosipaipi, jira-Akazadzisa hosipaipi nesimba-rusvingo hosipaipi michina uye namakemikari equipments zvakadai kutumirwa , Diesel injini, peturu michini, muchina maturusi, moto dziviriro kubatsira sunga unamire joggle.
mamiriro akashandisa midziyo
Yuyao Hengwei Hose Clamp Co.Ltd chinokosha zvebhizimisi, izvo unyanzvi mune mukugadzira clip. kambani iyi riri the yangtze River Delta upfumi yakaurungana Yutao Ningbo guta, pedyo Hangzhou Bay Bridge, inova 40 churu metres kubva Ningbo Airport, uye 60 churu metres kubva Ningbo pachiteshi, somugumisiro rine mukana zvifambiso uye kukurukurirana. boka redu hunogadzwa 2001 maviri akatevedzana chikuru mishonga:-siyana clip uye hosipaipi okusungisa, clip kuti tigone pombi abudise.
On February 11, 2015 mana Haiwa 'wachi masikati, kambani vakaita 2015 Spring Festival webato manheru, nzvimbo: muimba huru boka Miss webato hunomiririrwa mabhizimisi Kutarisirwa depa ...
Ningbo, Hangzhou, nemiviri purezidhendi vakasuwa ...
At 16:00 musi May 6, 2014, Ningbo, Hangzhou, namaviri purezidhendi hofisi musangano Chamber of Commerce rakaitirwa Ningbo Investment Co., Ltd. Lan House, kuti telephoto Ming, mutevedzeri womutungamiriri Feng Wei, Xie Guorong, kudaro. ..
Chamber of Commerce kubatanidzwa thr ...
April 29, 2014, maererano Chamber of Commerce, uye Tongxiang painter Jiaxing Association "pamitsara mitatu - Shen Wei, Chen Xueming, Zhou Minghua" kupenda kuratidzwa, rakaitirwa Drum Tower shongwe. Th ...
Munyori-General of Third Chamber of ...
April 25 mangwanani, Munyori Mukuru kuti Ningbo guta zvakananga pasi Alien Chamber of Commerce Chamber of Commerce maiva ne Quzhou rechitatu Salon, rakaitirwa Chamber of Commerce nhengo makambani Quzhou, Quzhou rekedzo ...
2014 Chamber of Commerce vanopinda mamwe kweva ...
April 24, 2014 masikati, 2014 mutsetse - Ningbo, Tianjin Waibu mari pamwe Forum muna Ningbo Jing Du Hotel. Munyori-General of Chamber of Commerce Jiang Lan kunonzwa uye akarongwa neZvapupu Coke uye Tia ...